Nhau - Maitiro ekuita kuti vatengi vazive bhurocha revhidhiyo munzira yekutenderera mune chinyorwa chipfupi?
Maitiro ekuita kuti vatengi vazive vhidhiyo bhurocha munzira yekutenderera mune pfupi pfupi chinyorwa?
Vhidhiyo bhurocha (cherekedza: maererano nechigadzirwa musimboti, inozivikanwawo sebhurocha remagetsi); vhidhiyo bhurocha chigadzirwa chitsva pamwe nekubatanidzwa kwechinyakare bhurocha uye MP4 vhidhiyo inoridza. Ndokuwedzera iyo LCD vhidhiyo inoridza kune yechinyakare bhurocha; saka bhurocha revhidhiyo haringori nebasa rebhurocha rechinyakare, asiwo basa rekuridza mifananidzo kana mavhidhiyo.
Saizi ye LED inowanikwa parizvino: 1.5 ", 1.8", 2.4 ", 2.8", 3.5 ", 4.3", 5 ", 7", nezvimwe.
* Tsanga switch
* Yakavakirwa-muLithium bhatiri
* USB kuchaja kufambisa
Vhidhiyo bhurocha ine anotevera makuru maficha:
1. Iyo butiro rebhurocha rakagadziriswa nemutengi.
2. Vhidhiyo yemukati inogona kutsiviwa nemutengi zvakazvimiririra.
3. Nekuti ine yekuchengetedza mashandiro eiyo USB flash drive, saka vanhu vanozonyanya kuda kuichengeta uye inoshanda zvakanyanya.
Otomatiki chinja (hapana mabhatani ari mubhurocha)
Ichiridza yega kana iwe ukavhura bhurocha uye wovhara kana iwe ukavhara iyo.
Iwe unogona zvakare kuwedzera mamwe mabhatani ebasa zvinoenderana nezvaunoda iwe, senge: kutamba, kumira, kumbomira, vhoriyamu, nezvimwe.
2. Nzira yekuchaja:
Yakazara USB tambo yekubatanidza kune komputa
3. Vhidhiyo kutsiva:
Iwe unogona kubatanidza bhurocha revhidhiyo nekombuta kuburikidza neUSB tambo, tsvaga inobviswa diski uye ipapo unogona kuchinja, kudzima kana kurodha chero vhidhiyo kubhurocha revhidhiyo iro rinogona kuita zvakafanana neyakajairwa USB.
Usage uye musika
Sekuenderana nekupatsanurwa kwebhurocha, rinonyanya kushandiswa pazviitiko zvinotevera.
Semuenzaniso, Zuva raAmai, Zuva reKisimusi, Zuva reValentine, zuva rekuzvarwa, nezvimwewo Dhizaini ine hunyanzvi uye nemoyo unofara unokomborera muvhidhiyo unoratidza iyo isingakanganwike kunzwa.
Semuenzaniso, kushambadzira kwemotokari uye chigadzirwa, kushambadzira kwekutengesa, kusimudzira kuchipatara, kusimudzira muhotera, nezvimwewo, vhidhiyo bhurocha rinotonga musika wevhidhiyo kadhi. Paunopa vatengi vako bhurocha idzva uye rekugadzira vhidhiyo, ichave ine chinangwa nekukasira iwe paunongoivhura uye inoridza vhidhiyo yekusimudzira yekambani kana vhidhiyo kuti ipe zvishuwo zvakanaka.
Semuenzaniso, kukokwa kwemabiko ezuva rekuzvarwa, kukokwa kwemuchato, nezvimwewo.
Semuenzaniso, chiitiko chekupemberera, kuyeuka kwekupedza kudzidza, nezvimwe, zvinogona kudzoreredza chiitiko panguva iyoyo uye chiyeuchidzo chakakosha cheunganidzwa. Vhidhiyo bhurocha ichapinda muhupenyu hwedu ine yakasarudzika uye yakapfuma chiitiko!